Imibuzo evame ukubuzwa - iJesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Ngabe uzodalula imininingwane yanoma yiliphi iklayenti kwamanye amaqembu angaphandle?
Ungalokothi. Siyaqonda ukuthi ulwazi lwebhizinisi lubaluleke kangakanani kukhasimende ngalinye. Noma iyiphi i-logo, umbhalo noma olunye ulwazi oluyimfihlo luyimfihlo eqinile. Sisebenza konke ngokusemthethweni nangokuziphatha.
Athini amahora akho Wenkonzo Yamakhasimende?
Abasebenzi bethu bokusekela batholakala amahora angama-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngesonto. Zingafinyelelwa nge-skype noma nge-imeyili.
Ngingafaka i-oda lami online nganoma yisiphi isikhathi?
Yebo, ama-oda aku-inthanethi angafakwa amahora angama-24 ngosuku.
Ngingayibuyisa yini imikhiqizo engiyi-ode ngemuva kokuyithola?
I-China-Flag-Makers ayikwazi ukwamukela ukubuyiselwa kwimidwebo ephrintiwe ngenxa yemvelo yangokwezifiso.
Uma unganelisekile ngokuthenga kwakho, sicela uxhumane nabaphenduli bethu bezinsizakalo zamakhasimende zingakapheli izinsuku eziyi-7 zokuthola i-oda lakho, futhi ngokubona kwethu, sizokwenzela ukulungiswa okufanele.
Uma uthola ukuthi kukhona ama-smudges amancane noma angagezeka kumidwebo ephrintiwe noma ezinkingeni zokuthunga ezingathinta isibonisi, i-China-Flag-Makers ingathanda ukukunikeza isaphulelo esingu-20% sale oda, esingasetshenziselwa i-oda lakho elilandelayo, umkhawulo wokuchitha ubuncane.
Yiziphi izinhlobo zamafayela ezamukelwa yiChina-Flag-Makers?
I-AI ne-PDF yizinhlobo ezimbili ezivame ukusetshenziselwa ukuphrinta efektri yethu. Namanye amafomethi wefayela ayamukeleka, kepha isilinganiso somfanekiso kufanele sibe ngu-1: 1 kwamanye amafomethi.
Ungaqinisekisa ukuthi umbala wokuphrinta uyafana nomsebenzi wami wobuciko?
Wonke amafayela e-RGB azoguqulelwa ku-CMYK lapho ephrintiwe. Lokhu kuguquka kungaholela komehluko omncane wombala, ozoba nomthelela kumphumela wokuphrinta wokugcina. Ukwehlisa umehluko wombala, sizobheka umbala wakho wobuciko ngekhadi elijwayelekile lePantone C, ngakho-ke sicela ucacise umbala wakho wePantone lapho ufaka umsebenzi wakho wobuciko.
Ngidinga usizo olungaphezulu kokulungisa ifayela lami lobuciko. Unayo imininingwane yobuciko ozoyihlola?
Yebo, chofoza Imininingwane Yezobuciko ukuthola eminye imininingwane. Uma udinga usizo olwengeziwe, ungaxhumana nabamele abahlinzeka ngamakhasimende ethu.
Ngikucela kanjani insizakalo ye-Artwork Design?
Ukuze usebenzise insiza yethu yoMklamo Wezobuciko, okokuqala, khetha umkhiqizo ofuna ukuwuthenga. Ekhasini Lomkhiqizo, chofoza i-Artwork Design. Bese ukhetha uhlobo olulodwa lomsebenzi wobuciko ngokuya ngezidingo zakho.
Oda & Shipping Usizo
Usebenzisa hlobo luni lwendlela yokuthumela?
Sinikeza insizakalo yokuthumela ethembekile neqeqeshiwe ukuqinisekisa ukuthi i-oda lifinyelela kuwe ngokushesha nangokuphepha. I-FedEx ne-UPS zivame ukusetshenziswa lapho kuthunyelwa i-oda lakho, futhi uma udinga ukuthumela ngezinye izindlela zokuthumela, sicela uxhumane nabamele inkonzo yamakhasimende.
Ngingabuyekeza ikheli lokuthumela?
Yebo, ungabuyekeza ukuthunyelwa kwakho noma ushintshe ikheli ngosuku olwandulela ukuhlelelwa kwe-oda. Sicela uxhumane nathi ngokushesha futhi Ummeleli Wesevisi Yethu Yamakhasimende uzosiza futhi aqinisekise lolu shintsho.
Yini engiyenzayo uma ngikwazi ukuthola izinto ezithile kuphakeji?
okokuqala, hlola ukuthi i-oda lithunyelwe futhi lalethwa ngokugcwele. I-oda lakho lingathunyelwa ngamabhokisi amaningi, ngakho-ke qiniseka ukuthi wonke amaphakheji alethwa. Uma wonke amabhokisi etholiwe, buyekeza isiliphu sokupakisha ngokucophelela bese uhlola okuqukethwe ngamaphakeji akho. Xhumana nathi uma i-oda lakho lilethwa ngezinto ezingekho noma izingxenye ezithile.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola i-oda lami?
Imvamisa, sinikeza isikhathi sosuku olungu-1, izinsuku ezimbili, izinsuku ezi-3 nezinsuku ezi-5 (* ngemuva kokuvunywa kobuciko) kuyo yonke imikhiqizo yethu yangokwezifiso, kanye nezinsuku zebhizinisi ezingama-2-5 zokuthumela ezincike ekukhetheni kwakho kwezinto. Ngemininingwane eminingi yokuthumela, sicela ubheke ku-Shipping & Delivery
Kuthiwani uma iphakethe lami lihlolwe amasiko?
Ukuhlolwa kwamasiko imvamisa kungukuhlolwa okujwayelekile. Uma izimpahla zibandakanyeka kubunikazi be-brand, kuyadingeka ukuthi unikeze i-brand Letter of Authorization futhi izimpahla kuzofanele zihlolwe amasiko. Uma kukhona ukungafani phakathi kwedatha yamasiko nenombolo yangempela yezinto, kufanele unikeze imininingwane noma ubhale umbiko.